यात्रा स्मरण : एक शिक्षकले मुम्बई यात्रामा पाएको शिक्षा | Aaja ko Shiksha
मैले त्यस आह्वानमा मनग्यै देश भेटेँ । आफूलाई नेपाली भन्न हिच्किचाउने जड र कृतघ्नहरूको गालामा थप्पड परेको अनुभूत गरेँ । अधिकार पाएको छैन, छ भन्छौ भने कहाँ छ, देखाई देऊ भन्नु प्रजातान्त्रिक परिपाटी नै हो । अरूको सम्मानमा कुठाराघात नगरी आफू सम्मानित हुन खोज्नु पनि स्वभाविक हो । तर, अरूको अस्तित्व मेटेर आफ्नो जग बलियो हुने सम्झनु नितान्त नालायकपन र निरङ्कुश शैली हो । मेरो यस निष्कर्षलाई धक्का लाग्नेगरी एक आवाज मेरै कान नजिकै भएर बिलायो । त्यो आवाज थियो एक उरन्ठेउलो ठिटोको । म बसेको बाइक ऊ नजिक पुगेपछि उसले मतिर दृष्टि दिँदै भनेको थियो– ‘...जिन्दावाद !!! ...मुर्दावाद !!!...लखेट्, लखेट् !!!’ उसलाई साथ दिनेहरू भने मुठ्ठीभर मात्र थिए । मलाई देख्नासाथ उसको रगत उम्लेको देख्दा मलाई पहाडे समुदायमा जन्मेकोमा हीनताबोध समेत भयो । उसको बोली मलिन–मलिन हुँदैहुँदै गयो । हाम्रो बाइक पश्चिमतर्फ हुँइकिरह्यो ।
म तराई÷मधेसमै जन्मँे, संस्कार भेटेँ, शिक्षा–दिक्षा पाएँ, रोजी–रोटीको व्यवस्था भेट्टाएँ र भविष्य हँसाउने झिनो लहरो समेत पाएँ । मैले जे गरेँ, जस्तो परिचय बनाएँ र जे गरिरहेको छु, सबै तराई÷मधेसकेन्द्रित छन् । कसैलाई अनावश्यक उचाल्ने र कसैलाई मारमा पर्नेगरी पछार्ने भूल नहोस् भनी सतर्कता अपनाउने गरेको छु । र, पनि कहिलेकाहीँ अन्तस्करणमा धक्का लाग्ने कुरा सुन्नुपर्दा चोट त नराम्ररी नै लाग्यो । तर, गुनासो पोख्नुपर्ने मान्छे परिचित पनि थिएन र साथमा पनि थिएन । त्यसैले मित्र सुनिलसँगै बह बिसाउने काम गरेँ । उनले सहजताका साथ जवाफ फर्काए– ‘सडकमा थरिथरिका मान्छे हुन्छन् । कोही अज्ञानताबस् त कोही अवसरका लागि नानाभाँतीका कुरा फलाक्छन् । आफूलाई ठूलो भनाउन र बनाउन कोही न्वारानदेखिको बल झिकेर निरर्थक चिच्याउँछन् । तिनको पछि सज्जनहरू लाग्दैनन् । किनभने बहुलाहा कुकुरले टोक्यो भन्दैमा बदला लिन असल मान्छे कुकुरलाई टोक्न जाँदैन ।’ यत्ति सुनेपछि मैले त्यस प्रसङ्गलाई त्यहीँ पूर्णविराम लगाएँ ।
साइकल, मोटरसाइकल र पैदले यात्रुले जनकपुर सहर ढाकिएको थियो । सडकमा ट्राफिक प्रहरीको नामोनिशान थिएन । सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कुनै ठाउँमा पनि देखिएनन् । अझ शिवचौकको एउटा दृष्यले भने लामो समयसम्म मलाई रन्थन्याई रह्यो– बीच सडकमा एक धुलाम्मे अधवैंशे मानिस ट्राफिक प्रहरीले झैं हात हल्लाई–हल्लाई चिच्याइरहेका थिए– ‘ए, तूँ रुक ! तूँ आगा बढ ! तूँ ओत जो आ तूँ यत जो ! तूँ तुफानमे गाडी नही हाँक् । हमर बेटासँगमे भेट करवाक बात छै त चला । हमर बेटाक हमर ठीकठाक समाचार सुनादिअ आ हमर आशिर्वाद सेहो सुनादिअ... ।’ यसो भनिरहँदा उनले धुलाम्मे हातले आँसु पुछे र भक्कानिएको आवाजमा अर्थोक बरबराइरहे ।
उनको सडकको गतिविधि नियालेर र वास्तविकता बुझेर मन खल्लो भयो । खानपिन गरी म भ्रमर सरले व्यवस्था गरिदिएको आनन्द होटलको कोठा नं. १०९ मा पसेँ र निदाउने चेष्टा गर्न थालेँ । बिहान ३ बजे नै आँखा खुले । सूर्योदयको आगमनसँगै काउण्टरमा पुगेँ । त्यस रातको त्यस कोठाको भाडा रू. ७५०।– बुझाएर भ्रमर निवासतिर पैदलै लागेँ । तीन–चार मिनेटमै भव्य भ्रमर निवास पुगियो । त्यहाँ पुगेपछि बोलेरो आयो । त्यसमा चढ्नेहरू भइयो– पूर्व प्राज्ञद्वय डा. रामदयाल राकेस र रामभरोस कापडि भ्रमर, विद्यापति कोशका पूर्व अध्यक्ष अयोध्यानाथ चौधरी, प्रा.डा. पशुपतिनाथ झा, युवा साहित्यकारद्वय रामराजा सिंह राठौर र विमलकान्त झा, चर्चित गायक नवीन मिश्र, युवा कलाकार रोहित साह र म नन्दलाल आचार्य । सबैका मोटामोटा झोला थिए । राजविराजमा नै करुणा झाले मुम्बईमा जाडो नहुने हुँदा जाडोका कपडा धेरै नबोक्न सल्लाह दिनुभएकै थियो । मैले त्यसलाई नै स्वीकारेको थिएँ । त्यसैले सबैभन्दा पातलो र सानो झोला मेरै थियो । सानो गाडी भएपनि हड्तालले गर्दा चर्को मूल्य तिरेर जनकपुर–दरभङ्गा यात्राका लागि बसियो । एक पछि अर्को गर्दै राठौर, रोहित र म झोलाले पुरिन पुग्यौं । अरूहरू उमेर र अनुभवले पाका हुनाले पनि झोलाको थिचाइबाट बचेका थिए । त्यस बेलाको असहज यात्रा सबैलाई मुखभरी आएको थियो । आन्दोलनरतहरूकै तारो बनिएला भन्ने त्रास विद्वान्हरूमा नै थियो । मैले मुख खोलेँ– ‘गाडी तोडफोड गर्न तम्सने पनि हाम्र्रै इष्ट–मित्र, भाइ–भतिजाहरू त हुँदा हुन् नि ?’ अरूबाट जवाफमा आवाज आयो– ‘आन्दोलनको आँखा हुँदैन । केवल अर्जुनदृष्टि हुन्छ । जो दृष्टिमा पर्छ त्यो कुचिन्छ ।’ राठौर र रोहित भन्दै थिए– ‘फेरि एउटालाई चिने पनि अर्को फटाहा कुडेर (बञ्चरो) लिएर अघि सर्छ । त्यसले विद्वान्सिद्वान् चिन्दैन । आन्दोलनलाई मात्र चिन्दछ । अराजक कर्म गरेर आनन्द लिने धेरै हुन्छन् । त्यसैले सतर्क रहनुपर्छ ।’
गुड्दागुड्दै नेपाल–भारत बोर्डरमा पुगियो । विराटनगरबाट रञ्जुको फोन आयो । भारत बोर्डरमा एनटीसीको नेटवर्क राम्रो नभएकाले राम्ररी कुरा भएन । जे भएपनि साली नानीले सम्झिछिन् भनेर मख्ख पर्दै मोवाइल थन्क्याएँ । केहीबेरमै नेपालका सीमा–सुरक्षाकर्मीले सोधपुछ गरे । जवाफमा भ्रमरले भन्नुभयोे– ‘हामी नेपालका साहित्यकार हौं । साहित्यसम्मेलनमा मुम्बई यात्रामा जाँदैछौं ।’ त्यहाँबाट दुई सय मिटर परको भारतीय सीमा–सुरक्षाबलको रोकावटमा जवाफ दिइयो– हम लोग नेपालके साहित्यकार है । साहित्य–यात्रामे मुम्बई जारहे है ।’ मलाई नेपालका साहित्यकार हौं भनेर परिचय दिँदा बडो गर्वबोध भयो । सबैलाई आफ्नै आफन्त अनुभूत गरेँ । अब त आफ्नो मुलुकको भूमि पनि छाडिसकिएको थियो । अब जो र जे भने पनि यात्रारत् साथीहरू मात्रै थिए । उहाँहरूले नै मलाई मैथिलीमा बोल्न उक्साउनु भयो । म पनि रौसिएँ । मेरो मैथिली बोलाइ र लवजमा अनौठोपन थियो । म खासमा मैथिली भाषामा पारङ्गत छँदै थिइनँ । यात्रावधिभर मैले मैथिलीमै संवाद गर्ने कोसिस गरेँ । तर, उहाँहरू भने किन हो कुन्नि मसँग नेपालीमा नै बातचित गर्नुहुन्थ्यो । मैले बोलेको मैथिली भाषा र लवज सुनेर नेपालबाहिरका मानिसहरूले मलाई भोजपुरी भाषी भारतीय समेत भने । मैले सगर्व नेपाली मातृभाषी भएको नेपाली हुँ भनी भ्रम चिर्ने काम गरेँ । कतिपयले भाषा सिकाइदिन आग्रह गरे । हिन्दी, मैथिली र अङ्ग्रेजीका विविध वाक्य नेपालीमा अनुवाद गर्नसमेत भने । मैले बोलेका कुरा मोवाइलमा रेकर्डसमेत गरे र केही कुरा बोल्ने कोशिससमेत गरे । भाषा सिकाइको त्यो क्षण छोटो तर स्मरणीय थियो ।
पटना पुग्दा नपुग्दै सयौंका सङ्ख्यामा युवा विद्यार्थीहरू किताब–कापी, झोला लिएर ट्रेनमा छिरे । अरू डिब्बामा के गरे कुन्नि ! हामी बसेको डिब्बामा भने तल–माथि कतै खुट्टा टेक्ने ठाउँ भएन । मेरो सिट माथिल्लो भागमा थियो । त्यसमा पनि ‘प्लिज ! इतना जगह दिजिए’ भन्दै तीनजनाले चाक अड्याए । ‘नो ! नो !’ भन्न नैतिकताले दिएन । अझ अर्को स्टेशनमा युवाको लाइन लामै देखियो । हुँदाहुँदा बाथरुमसम्म पुग्न सक्नु युद्ध जितेझैँ हुन लाग्यो । अल्लारे ठिटाहरूकोे कोलाहल उत्ति नै थियो । न बाहिर न भित्र कतै कोही पनि कुनै सामान बेच्न आएन । आओस् पनि कसरी ! पाइलो राख्ने ठाउँ थिएन । कमजोर मान्छे आयो भने चेप्पिएर त्यहीँ शहादत हुने अवस्था थियो । भोकको सीमा हरायो । पानी त साथमा थियो, पिउन डर लागिरहेको थियो । बाथरुम जाने बाध्यता आयो भने ठिटाहरूको चेपाइमा परेर अधकल्चो हुने निश्चित थियो । अर्कातिर आफ्नो सुत्न पाइने सिटमा मज्जाले बस्नसम्म पाइएको थिएन । त्यसमा पनि कसैको ‘प्लिज ! कुछ समय’ भन्ने आवाजको मारमा परिएलाकी भन्ने त्रास जिउँदै थियो । यात्रामा निक्कै कुरा सुनियो । अधिकृतस्तरको बिहार राज्यको परीक्षा इलाहावादमा राखिएको रहेछ । ती जागिर खान चाहने युवाहरू रहेछन् । उनीहरू त्यसै ट्रेनमा यात्रा गर्न विवश रहेछन् । पटना पछिका स्टेशनमा त कोही पनि चढ्न सकेन । नारा लगाएको ठूलो स्वर भने सुनियो । ढ्याक्–ढ्याक् र ढुक–ढुक पारेर झ्याल नजिकका यात्रुलाई हैरान पारे । अझ झ्यालबाट झोला थुतेर भाग्ने क्रम तीब्र भयो । सामान हराएर बिलौना गर्नेहरूको सङ्ख्या थपिँदै गयो । इलाहावाद कहिले आउला र त्यस भद्रगोलबाट मुक्ति पाइएला भनेर प्रार्थना गर्दैमा बिहानको ३ः३० बजेछ । अब भने फटाफट युवाहरू झर्न थाले । अनि टन्न पानी पिएँ । मनलाई र पेटलाई थामथामथुमथुम पारी निद्रादेवीको शरणमा लम्पसार परेँ ।
बिहानको सूर्य जवान भएपछि मात्र आँखा खुले । बुढाखाल घुमफिरमा निस्किसकेका रहेछन् । हामी युवाखालसमेत योजना बनाउन थाल्यौं । समुद्र दर्शन, ताज होटल भ्रमण, एलिफेण्टा अवलोकन, पानीजहाज यात्रा आदि ठाउँहरूको नाम आए । यसो गर्दा र उसो गर्दा समय भागिरहेको थियो । बल्लतल्ल भ्रमणको साइत जु¥यो । प्रौढ वर्गको पछि युवा वर्ग पनि लाग्यौं । बिरार रेल्वे स्टेशनमा पुगेपछि नखाएको विषले पिरोल्यो । स्थानीय पुलिसले विमलकान्त झा र मलाई नराम्ररी उल्लू बनायो । जथाभावी थुकेको आरोप थियो । बहस गर्न भाषा बाधक थियो । उसले भनेको नमाने अरू साथीहरूको यात्रासमेत अवरुद्ध हुने निश्चित थियो । धेरै समय नलगाइकनै हामीले जरिवानास्वरूप भारू १००÷१०० रुपैयाँ गन्यौं । पैसा तिर्न नमान्दा रसिद काट्न तयार भएको नगर पुलिस पाएपछि रसिद नै नदिइकन सुइकुच्चा ठोक्यो । बहस गर्न इज्जतको डरले नदिएको कुरा मित्रवृत्तबाटै सुनियो । कोही घटना सम्झी–सम्झी हाँस्न थाले । आफू त उल्लू बनेको मान्छे, लाटै रहँदा जित हुने ठहर गरेँ । चुपचाप पछि–पछि लागेँ । त्यस बखत मेरो टिकटे साथी बन्नुभएको थियो– डा. रामदयाल राकेस । उहाँले मेरो कानैमा भन्नुभयो– ‘अरूलाई पर्दा हाँस्ने मन आफूलाई पर्दा रुन्छ । तिर्नै नपर्ने दण्ड तिरियो । त्यस चुत्थाले दण्डित गरेको होइन, लुटेको हो । जे भो–भो मन अँध्यारो नबनाउनुस् । हँसिलो बनाएर हँसिमजाक गर्ने आफ्नै साथीको मुख लोप्रयाइदिनुस् ।’ मैले मुन्टो हल्लाएरै स्विकारोक्ति दिएँ ।
(लेखक, सिरहाको कर्जन्हा–४ स्थित श्री जनसेवा माविका शिक्षक हुनुहुन्छ ।)